मनाउको प्रसेनीमा हात्ती आतंक: एकको ज्यान गयो, दुई घाईते | BARDIYA ONLINE |
बअ सम्बाददाता | प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १३, २०७३ ।
[ अपडेट ] *अहिले निकुन्ज टोली र नेपाली सेनाको टोलीले गस्ती गरिरहेको छ ।
भर्खरै तीन ट्याक्टर नेपाली सेना आएका छन, जुन बेसरी बज्छ त्यहीवाला ट्याक्टरमा आएका छन, आज रातभरी गस्ती गर्ने जनाईएको छ ।
* बस्ती त्रासमय छ । स्थानिय बसिन्दाहरु अहिले आफ्नो घर छोडी स्कुलमा (धर्मभक्त प्रा. बि. र गणेश मा.बि) बस्न गएका छन । कोही पक्की घर हुनेहरुकोमा गएका छन भने पक्किघरमा पनि छतमाथि जम्मा भएर बसेको स्थानियले जनाएका छन ।
मनाउका प्रसेनी, नौरङ्गा लगायत अन्य छिमेकी गाउँहरु अहिले सुनसान प्राय: रहेको बताईएको छ ।
* घटनास्थलबाट अकेला ठाकुरले दिनुभएको जानकारी अनुसार हात्ती अहिले उदयपुर तिर लागेका छन । प्राप्त समाचार अनुसार मनाउमा ५ वटा घर भत्काएको, २ वटा गोरु र एउटा रागोलाई आक्रमण गरी मारेको खबर छ ।
मनाउ गाबिसको प्रसेनीपुरमा हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा २६ वर्षिया विमला परियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरर्निया वाइल्डलाइफ सेन्टरको बिचबाट आएका तीन वटा हात्ती गाउँमा पसेका हुन् । हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएका निर्मलल सिंह ठकुरी र रामप्रसाद लामिछानेलाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज पठाइएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीले हात्ती नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । हात्तीले पशुचौपाय पनि मारेका छन् । क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ । हात्ती गाउँमा पसेपछि स्थानीयबासिन्दा त्रसित भएका छन् ।
तस्बिर: अकेला ठाकुर
बर्दियामा विप्लव निकट १३ जना पक्राउ